Samsung Galaxy S8 အသစ်သည် Google Daydream နှင့်မကိုက်ညီပါ Androidsis
Samsung Galaxy S8 အသစ်သည် Google Daydream ကိုမထောက်ပံ့ပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | Samsung
တောင်ကိုရီးယားဆမ်ဆောင်းမှမကြာသေးမီကတင်ဆက်ခဲ့သောဆိပ်ကမ်းအသစ်များသည်ထုတ်လုပ်မှုအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သို့သော်၎င်း၏အသစ်အဆန်းများနှင့်စွမ်းအားများရှိသော်လည်း၊ Galaxy S8 နှင့် Galaxy S8 Plus နှစ်ခုစလုံးက Google Daydream ကိုမထောက်ပံ့ပါ။
Daydream application ကို Samsung မှ Gear VR ကိရိယာနှင့်အသုံးပြုရန်အတွက် Samsung Galaxy S8 သို့မဟုတ် S8 Plus အသစ်ပေါ်ရှိမည်သည့်အရာကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းကိုမေ့လိုက်ပါ၊ အမှားမက်ဆေ့ခ်ျ.
Samsung ၏ Gear VR ပလက်ဖောင်းသည်ရရှိနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက်အမြင့်ဆုံးတိုးတက်မှုအဆင့်ရှိသော်လည်း Samsung Daydream ကိုထောက်ပံ့ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ဂူဂဲလ်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုရယူလိုသောသုံးစွဲသူများအတွက်စိတ်ပျက်စရာSamsung ပလက်ဖောင်းမှသုံးခွင့်မရသော application အချို့ပါဝင်သည်။
Samsung တွင်ကိုယ်ပိုင် virtual reality (VR) ပလက်ဖောင်းရှိသဖြင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ Gear VRs ကို Google ပလက်ဖောင်းနှင့်အလုပ်လုပ်စေချင်။ မလိုချင်၊ ထို့အပြင် Samsung နှင့် Oculus အကြားဆက်သွယ်မှုသည် Daydream ပလက်ဖောင်းဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်ဂူဂဲလ်နှင့်သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုအကြားဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။ Samsung Galaxy S8s ကို Daydream မလည်ပတ်စေရန်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်မရှိပါ.
မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်ကနေ နေခြည်ဒီအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဝေတဲ့မီဒီယာကထောက်ပြတယ် Daydream အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် Galaxy S8 system permissions files မှာ line line ကိုသာပြောင်းလဲလိုက်ပါ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသည် root access လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် S8 တွင်မရရှိသေးပါ။
Galaxy S8 အသစ်ကို Google Daydream နဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S8 အသစ်သည် Google Daydream ကိုမထောက်ပံ့ပါ
Jon စမ်းသပ်မှု ဟုသူကပြောသည်
နှင့် Gear VR ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ Daydream မျက်မှန်ကိုသုံးပါ? ဖြစ်နိုင်ပါသည်? Youtube ဗီဒီယိုများအတွက် VR App အပြင်ဘက်ရှိ web သို့မဟုတ် Android app မှသင်အမြဲသွားနိုင်သည်။ ကြွင်းသောသူတို့မူကား၊
Jon Test ကိုပြန်ကြားပါ
Spotify အတွက်အိပ်စက်ခြင်း Timer နှင့်အခြားအရာတစ်ခု။ အံ့သြစရာ!!